နှစ်ခါပြန်ကြည့်မိသွားမယ့် ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် လွန်းတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ ရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယို – Real Link
နှစ်ခါပြန်ကြည့်မိသွားမယ့် ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် လွန်းတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ ရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယို
မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် ပတ်ထရစ်ရှာ က တော့ မိန်းကလေးတိုင်း အားကျရလောက် အောင် သွယ်လျ ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အလှတွေ ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သရုပ်ဆောင် ကောင်းသူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်။
နိုင်ငံခြားသူပုံစံလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းပြီး ယောက်ျားလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ သည်းသည်းလှုပ်အားပေးမှုတွေကို အများဆုံးရရှိထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပက်ထရစ်ရှာ က တော့ ညို့အားပြင်း တဲ့ ပင်ကိုယ် အလှတရား တွေ ကို အထင်းသားပေါ်လွင်နေတဲ့ ဖက်ရှင်လေး တွေနဲ့ ညို့ချက်တွေပြင်းပြင်း အလန်းစားရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ ထက်မှာ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်နော် ဆွဲဆောင်မှု တွေရှိပြီး မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေကတော့ မိန်းကလေး အချင်းချင်းတောင် ကြွေရလောက်အောင် ညို့အားပြင်းနေ တာမို့ ပရိသတ်တွေကို လည်း အချစ်ပိုစေမှာပါနော်.
ယခုတစ်ခါမှာတော့ ပက်ထရစ်ရှာက ညို့အားပြင်ပြင်းနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့် ပုံစံလေးနဲ့ အလန်းစား ဗွီဒီယိုလေး တစ်ခုကို ချပြလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီး အတွက် ပက်ထရစ်ရှာ ရဲ့ အလန်းစား ဗွီဒီယိုလေးကို ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ေမာ္ဒယ္လ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ပတ္ထရစ္ရွာ က ေတာ့ မိန္းကေလးတိုင္း အားက်ရေလာက္ ေအာင္ သြယ္လ် ေျပျပစ္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အလွေတြ ကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္ ေကာင္းသူေလးလည္း ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ နိုင္ငံျခားသူပုံစံေလးနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းၿပီး ေယာက္်ားေလး ပရိသတ္ေတြရဲ့ သည္းသည္းလႈပ္အားေပးမႈေတြကို အမ်ားဆုံးရရွိထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ပက္ထရစ္ရွာ က ေတာ့ ညိဳ႕အားျပင္း တဲ့ ပင္ကိုယ္ အလွတရား ေတြ ကို အထင္းသားေပၚလြင္ေနတဲ့ ဖက္ရွင္ေလး ေတြနဲ႔ ညိဳ႕ခ်က္ေတြျပင္းျပင္း အလန္းစားရိုက္ကူးထားတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြ ကို လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ ထက္မွာ တင္ေပးေလ့ရွိပါတယ္ေနာ္ ဆြဲေဆာင္မႈ ေတြရွိၿပီး မိမိုက္လြန္းေနတဲ့ ပုံရိပ္ေလး ေတြကေတာ့ မိန္းကေလး အခ်င္းခ်င္းေတာင္ ေႂကြရေလာက္ေအာင္ ညိဳ႕အားျပင္းေန တာမို႔ ပရိသတ္ေတြကို လည္း အခ်စ္ပိုေစမွာပါေနာ္.
ယခုတစ္ခါမွာေတာ့ ပက္ထရစ္ရွာက ညိဳ႕အားျပင္ျပင္းနဲ႔ ဆြဲေဆာင္မႈအျပည့္ ပုံစံေလးနဲ႔ အလန္းစား ဗြီဒီယိုေလး တစ္ခုကို ခ်ျပလာခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ပရိတ္သတ္ႀကီး အတြက္ ပက္ထရစ္ရွာ ရဲ့ အလန္းစား ဗြီဒီယိုေလးကို ျပန္လည္ မၽွေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
Previous post လုံးကိတ်နေတဲ့ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်း တွေ နဲ့ ပုရိသ တွေ ရင်ခုန်အောင် ဖမ်းစားလိုက်တဲ့ မျက်ဝန်း
Next post အသက်ရှုမှား သွားစေလောက် မယ့် ချိုဇင်ဝင်းပြည့် ရဲ့ ညို့ချက် အပြင်းစားတွေနဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး